Amakhadi okuthenga ngetyala ahlala ehamba esebenzisa uhlobo oluthile lwenqaku ukubala umvuzo owufumanayo kwaye ezi nkqubo zihlala zintsokothile. kwakhona, amanye amakhadi anyanzelisa ubuncinci bokuthenga ngaphambi kokuba ufumane amanqaku kuwo onke. Umzekelo, unokucelwa ukuba wenze $1000 okanye ngaphezulu ekuthengeni ngaphezulu kwenyanga ezintathu ngaphambi kokuba uqale ukufumana amanqaku. Ukubeka itikiti lenqwelomoya kwikhadi lakho lokuthenga ngetyala yindlela elula yokuhlangabezana nobuncinci. Kodwa unokuhlangabezana nayo usebenzisa ikhadi lakho iinyanga ezimbalwa ukuhlawulela iindleko zemihla ngemihla. Qiniseka ukuba ugcina umkhondo wentengo yakho yokuthenga ukuze uqiniseke ukuba usendleleni inyanga nenyanga ukufikelela kwinjongo yakho yenkcitho.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog "Indlela Yokwenza A Train Uloliwe Ngakumbi Budget-Friendly" kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-adventure-budget-friendly%2F%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)